အခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့လိုးဂိမ်းကစားတယ်
အခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများဒီမှာ!
ဒါဟာအမြဲတမ်းအံ့သြမိန်းငါ့ကိုမှကြွလာသောအခါထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်အပြာအာကာသ၊ဒါကြောင့်လူအနည်းငယ်ကအယူအ punt ဂိမ်းများအပေါ်တကယ်အလုပ်အကြိမ်းပနယ်ပယ်နှင့်ဆန့်ကျင်သွားစပါး။ အားလုံးပြီးနောက်၊ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနားလည်ပြီးတန်ဖိုးထားလေးမြတ်တစ်ခုရှိပါတယ်ကြီးမားသောဝယ်လိုအားအတွက်များအတွက်စျေးကွက်အလိုးကား၊လက်ျာ? နှင့်ဒုတိယအ၊ကျနော်တို့လည်းထွက်ပုံဖော်ကြည့်နိုင်ပါကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအစွဲကြီး tentacle အရေးယူနိုင်လျှင်ထိုသူတို့အားပေးတဲ့ပုံစံထဲတွင်သူတို့ချစ်နှင့်ပျော်မွေ့မတူဘဲအားလုံးထက်။, ကောင်းစွာ၊အဆိုပါသတင္းမ်ားအကြောင်းတော့အနည်းငယ်ဂိမ်းကစားခြင်းပေါက်များမှာဖွင့်ထားပေးရန်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားသူတို့ဘာလိုချင်–ကြကုန်အံ့တယောက်တည်းသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုလိုးကားခေါင်းစဉ်နှင့်နောက်ထပ်နေဆဲပင်နှောင့်အယှက်မှဆင်းသွား tentacle ထြက္ခြာ! ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါသည်သင်ပြောပြချင်အားလုံးအခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုရှာဖွေတာပေါ့ဒီမှာချင်တယ်ဆိုရင်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရ။ ကျနော်တို့စွဲဖန်တီးအကောင်းဆုံးဂိမ်းဖြစ်နိုင်ပြီးအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းလျှင်သင်အ coomer နှင့်အတူတစ်ဦးအစွဲအ tentacle ပျော်စရာ၊သင်ကဘောလုံးကိုရှိသည်များနှင့်ခွဲအတွင်း။ အဆင်သင့်အဆင့်တက်နှင့်မြင်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပူဇော်။, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးအခုအတိအကျကိုပြုမည်–သိကအာရုံစေသည်!
ကျွန်တော်မကြောက်င့်မှကြောင်းဝန်ခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မှာညမ်းကစားပြိုင်ပွဲ၏နှစ်အသွားအားဖြင့်၊တဦးတည်းအရာကအလိုလိုရုပ်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကြောင်းရှိပါတယ်အလွန်အနည်းငယ်သောနေရာများတွင်အင်တာနက်နိုင်ခဲ့င့်ဘယ်မှာအဘယျသို့ရရလိုခငျြ။ ဝမ်းနည်းစရာ၊အခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများမကရှာဖွေလည်းအများအပြားရွေးချယ်စရာအ punters ချင်သောအလွန်ကြီးစွာသောရှာဖွေနေလိုးဂိမ်းများ–ဒါပေမယ့်အဲဒီနေရာအတွက်လာနှင့်အကောက်အပေါင်းတို့၏ပရိသတ်များထွက်ရှိကြောင်းအမှန်တကယ်ချင်တယ်တစ်ခုခုအတွက်ဒီအာကာသ!, ဘာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ခၚရာအထိ ၁၁ ခြင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကဖန်တီးအကောင်းဆုံးအချို့ XXX ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်၊သင် jizz လာကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာသင်ဘယ်တော့မှမမီဖြစ်နိုင်သောထင်။ အဖွဲ့စည်းများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ၊အကြှနျုပျတို့သညျဖို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ငါပေးအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိပါတယ်အမြင်အာရုံအစည်းအဝေးနှင့်အရသာအပြိုင်ပင်မစက်မှုလုပ်ငန်း။ လျှင်သင်အကြောင်းစဉ်းစား Cyberpunk ၂၀၇၇ ကောင်းကြည့်ရှု၊အရုံစောင့်ဆိုင်းရန်ကြိုးစားသည့်တိုင်အောင်သင်ကျွန်ုပ်တို့၏tentacle ဂိမ်း! ကျနော်တို့အလုပ်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုရောက်စေဖို့သင်၏အဆင့်ပြီးစီးခြင်းနှင့်ပိုလန်အကြောင်းသင်အမှန်တကယ်ထိုက်။, ဘာမှမထက်လျော့နည်းပြည့်စုံရိုးရိုးမသွားဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တော့လာကြည့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှရတယ်ကမ်းလှမ်းချက်–ခင်ဗျားချစ်သွားနှင့်တော့အချို့!
အမည်ဖြစ်နိုင်ပေးသွားအဘယျသို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပတ်သက်။ငွေပေးချေမှုရမည့်:အခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးကျနော်တို့အစီအစဉ်ကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့လမ်းများအတွက်ငရဲ၏။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤသည်အဓိကအားသောကြောင့်၊ကျနော်တို့ကြောင်းသိရှိလိမ့်မယ်လို့တစ်အမှိုက်ပုံအတွက်သံသယဤစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သုံး၊ဂိမ်းကစားနိုင်မှအတွေ့အကြုံသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ဤအပြင်၌၊သုံးစွဲခွင့်ပုံစံပေါ်တွင်ဒီအခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများဆော့ကစားခွင့်ပြုထားအားလုံးခေါင်းစဉ်ပြီမှတဆင့်။, လက်ရှိတွင်အသင်းအတွက်ပံ့ပိုးမြေခွေး၊ဆာဖာင့္ထားေသာ္လည္းသီအိုရီအတွက်၊တော်တော်များများမဆိုအပိုင်း-မကြာသေးရာက္ဇာဖို့ဖြစ်နိုင်မှအလုပ်နှင့်လက်မှာအလုပ်တစ်ခုကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်သူများနှင့်စစ်သားများအတွက်ဒီနေရာနဲ့ကျနော်တို့ရမယ်သူတို့ကိုကရက်ဒစ်ပေးရ–အဆုံး၏ရလဒ်အားလုံးသည်၎င်းတို့၏အလုပ်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီအမှန်တကယ်စိတ်ကူးလိမ့်မည်ဟုပလက်ဖောင်းဖြစ်သိမ်းယူသောနောက်အဆင့်မှဤမျှကာလပတ်လုံးသင်ကဲ့သို့ဂိမ်းကစားချိန်၌ပြသပြီးကြောင်းသင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့အခမဲ့လိုးဖြန့်ချိကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။, ပါကကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်အရာမှအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအနိုင်ရမှပေးဆောင်သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူဖြစ်စေ–ဤဂိမ်းသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏ပျော်မွေ့နှင့်အတူလွှဲပြောင်းတစ်ပြား!
တစ်နိဂုံးပိုင်းအပေါ်အခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများ
ငါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဒီမှာထိုင်ပြီးစကားပြောဖို့အကြောင်းများအားလုံးအေးမြပရိကံကြောင်းအခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ယုံကြည်ကြဘူးဖြစ်နိုင်မယ့်ငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်နှင့်ကြောင်းအကြံပြုအစားအစာကုံး၊ကအကောင်းဆုံးသင့်အဘို့အဖန်တီးရန်အကောင့်တစ်ခုအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအဘယ်အရာကိုမြင်ကိုလျှောက်လွှာကျနော်တို့သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်။ မှာထိုနေ့၏အဆုံး၊ဤအသိုင်းအဖြစ်ယူဆသောနေရာသင်ပူးပေါင်းနှင့်ပျော်မွေ့–အရာတစ်ခုခုကြည့်ဖို့အဝေးကနဲ့ဂ။, ဒါလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြီးမားဆုံးမျက်နှာဖြစ်နိုင်:သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အခမဲ့ Tentacle လိင်ဂိမ်းများနှင့်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြီးစွာသောဂိမ်းကောင်းမြတ်မည်ဟု! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာ jerking။